Hlola iBordeaux, eFrance - World Tourism Portal
Hlola iBordeaux, eFrance
Yini okufanele uyenze eBordeaux, eFrance
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eBordeaux, eFrance.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBordeaux
Bukela ividiyo mayelana neBordeaux
Hlola iBordeaux, edume ngewayine yayo kodwa futhi idolobha eliphithizelayo elinokuningi okubonakalayo komlando ongakuthola. Kubhalwe phansi njengeSayithi lamaGugu Omhlaba ukuze "Umhlangano omkhulu wamadolobha nowokwakha". Lyon, idolobha lesibili ngobukhulu kuleli, nalo lifakwe kuhlu, futhi linezindawo ezinhle zakudala kanye namanxiwa amaningana aseRoma. I-Strasbourg, enye yezinhloko-dolobha ze-EU, inesimo sayo, ngamathonya acacile amaJalimane. IMontpellier ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eningizimu, enezakhiwo eziningi ezinkulu namakhekhe amahle. Entshonalanga kukhona idolobha elihle lomlando I-Nantes, ekhaya leChâteau des ducs de Bretagne nezinye izikhumbuzo eziningi. ICapitole de Toulouse itholakala ngqo enhliziyweni uhlelo oludumile lwedolobha laseyunivesithi. Okokugcina, ungabukeli phansi i-Arles, eneZikhumbuzo Zayo Zomhlaba Ezihlalwe Ngaphansi Kwezipho ZamaRoma NamaRoma.
Uzobe uphakamisa ingilazi yakho kaningi eBordeaux, edume ngamawayini wayo, abhekwa njengephambili emhlabeni. Njengoba inhloko-dolobha yomnyango i-Gironde esifundeni i-Aquitaine, inezakhamizi eziyisigidi esigabeni sayo. Ngemuva kweminyaka yokunganakwa, amadokodo angaphambili amanzi yindawo entsha eshisayo yezwe, inezindawo zokudlela eziningi zekhefi, izingadi kanye nomnyuziyamu kuqhamuka ngaso sonke isikhathi. Umphakathi ophilayo waseyunivesithi ongaphezulu kwe-60,000, (iBordeaux Campus yiwona omkhulu kakhulu kuyo France) isungula ukuthi i-Bordeaux imayelana nje ne wayini.
I-Bordeaux ithathwa njengeyabekezelela kakhulu futhi ivuselelekayo. Izithombe zesiko, ubuciko kanye nomculo zinhle kakhulu. Leli dolobha lalibuswa amaNgisi isikhathi eside, yingakho iBordeaux ibukeka sengathi ine "flair yesiNgisi".
IBordeaux ivame ukubizwa ngokuthi “Encane Paris"Nokubangisana okukhona phakathi kwe-" Bordelais "ne" Parisiens "kuyindaba eshisayo, ngakho-ke ungathola ezinye izingxabano ezivuthayo ngaleyo ndaba ngesikhathi usahlala.
I-Geography Bordeaux yidolobha eliphansi, elakhiwe ngasosebeni loMfula iGaronne. Futhi kungumuzi omkhulu waseFrance ngendawo futhi ngenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke eYurophu. IGaronne ihlanganisa amakhilomitha ali-12 ngaphansi komuzi nomunye umfula, iDordogne River ukuze yakhe iGironde Estuary, okuyisifunda esikhulu kakhulu eFrance.
Isikhungo sedolobha sitholakala entshonalanga naseningizimu yeGaronne. Empumalanga kukhona amagquma ambalwa - okuwukuphela kwawo eduze. Lawa magquma aphawula ukuqala kwezindawo zezimboni kanye namadlelo angaphansi komhlaba. Ngoba yidolobha elisicaba, amabhayisekili enza izindlela zokuhamba ezinhle kakhulu, ikakhulukazi njengoba idolobha linamakhampasi womjikelezo ongaphezu kwe-580 km. IBordeaux iphakathi kwamadolobha anamandla kwezomnotho eFrance.
Ngenxa yobuthakathaka bokwebuka okungaphansi, azikho izingcweti eziseBordeaux, ezichaza ukunuka kwazo. Isikhungo sedolobha sigcine izindlu zaso zendabuko kanye namathafa ahlakaniphile, yingakho leli dolobha libizwa nge- “Little Paris”.
Izakhiwo zesimanje zingatholakala entshonalanga (isikhungo sokuphatha) kanye naseningizimu (inyuvesi) yedolobha.
Ungafinyelela eBordeaux Ngendiza. Isikhumulo sezindiza iBordeaux-Mérignac sisentshonalanga yedolobha. Kuyisikhumulo sezindiza esisebenza kakhulu ezindizeni, noma kukhona izindiza zomhlaba wonke futhi zixhuma iBordeaux kwezinye zezikhumulo zezindiza zaseYurophu ezinjenge “hub” Paris (U-Orly noRoissy), London (UGatwick noLuton), Madrid, Futhi Amsterdam.
Isikhumulo sezindiza i-Bergerac Dordogne Périgord sisebenzela izindiza eziningi. Ngokusho kwe-2017, isikhumulo sezindiza asisebenzi ngezinto zokuhamba zomphakathi.
Ukusuka eParis Charles de Gaulle Airport kukhona izinsiza zesitimela ezihamba ngejubane eliphezulu kusuka esiteshini sesitimela esiseduze kwesiteshi i-terminal 2 kuya esiteshini saseBordeaux Saint Jean. Isikhathi sokuhamba esisheshayo sesitimela esiqondile ngamaminithi we-3 hrs 33 amaminithi.
Isiteshi esikhulu sesitimela (iGare Saint Jean) sitholakala cishe nge4km ukusuka enkabeni yedolobha. Izitimela eziningana ngosuku (cishe ihora ngalinye) ziya enyakatho (ukuya eParis, cishe amahora angu-2 -3, ama-25 aqeqesha ngosuku, i-Angoulême, ama-Poitiers), eningizimu (kuya Toulouse, eMarseilles, IMontpelfer (cishe i-4 kuya emahoreni angu-5), kuze kube seNice), nasempumalanga (kuya Périgueux futhi Clermont-Ferrand).
Amabhasi, amathilamu namatekisi asuka phambi kwesiteshi. Thatha i-Tram C ukufika edolobheni uma uya engxenyeni esenyakatho, noma ngebhasi uma uya endaweni ezungezile. Indawo de la Victoire.
IBordeaux idolobha elikhulu impela; noma kunjalo, eziningi ezikhangayo ezitholakala enkabeni yedolobha. Akunconyelwe ukuthi izivakashi zishayele njengoba kuhlale kuyinkinga ukupaka, futhi kuvame ukuba nezimoto eziningi emigwaqweni emincane yedolobha.
Indlela ethakazelisa kakhulu yokuhlola idolobha ukuhamba. Njengoba iningi lesikhungo sedolobha liyindawo 'yabahamba ngezinyawo', kulula ukwenza. Uma uthanda ezemidlalo, ungaqasha ama-roller-skates noma ibhayisekili noma ungenza indlela yakho edolobheni usebenzisa imigqa yebhasi ehlukahlukene. Isikejana esincane esivumayo ukuhamba sisuka ogwini olusentshonalanga lomfula siye ogwini olusempumalanga, okuphambene nalokho.
Imigqa kathathu esebenza kahle iyatholakala (A, B, no-C), amathikithi abiza i-1.50 € futhi ahlanganisa uhambo olungenamkhawulo ngaphakathi kwehora elilodwa lokuqinisekiswa. Imishini ayemukeli amanothi ngakho-ke uzodinga i-French Carte Bancaire noma izinhlamvu zemali.
IBordeaux idolobha elinomlando elinezindawo eziningi zokuvakasha. Izifunda ezinkulu zethulwe kafushane lapha, ezifakwe ohlwini ngokusuka ebangeni lazo ukusuka esiteshini sesitimela.
ILes Quais — Ilungele ukuhamba uhambo oluhle ogwini lweGaronne, ukujabulela ukugibela esikebheni esikebhe, ukubuka ubuhle obumangalisa phezu kwamabhuloho eBordeaux, noma ukudansa ebusuku ezinkundleni zemidlalo zasebusuku eziningi. I-Aquitaine Bridge iyinhlangano yokwakha eyingqayizivele eFrance.
Ibhuloho lokuphakamisa iJacques-Chaban-Delmas; phakathi kwe "Quais" ne "Aquitaine Bridge". Ivulwe ku-2013, ifaka emphemeni ongaphakanyiswa, okhuphuka ngamamitha we-53 (i-170 ft), ukunika amandla imikhumbi ehamba ngomkhumbi nezikebhe zomlando zesikebhe eziseduzane ne-Quinconces Square.
La Victoire - Izigodlo zomlando zihlangana nempilo yabafundi nemigoqo.
Isikhungo sabahamba ngezinyawo - Uma uhlela ukuyothenga, noma ufuna imisebenzi yamasiko, iBordeaux inokuningi ongakunikela ngakho - futhi iqala lapha.
IGambetta Square - izifunda ezicebile zeBordeaux ziqala enyakatho - le ngxenye yedolobha ibizwa ngokuthi "Little Paris".
I-Quinconces Square - Qiniseka ukuthi ubheka lesikhumbuzo somthombo kumaGirondins, iqembu labaphathi abalinganiselayo nabongxiwankulu beLungu Lezwe lonke ngesikhathi seMvukelo yaseFrance.
IMeriadeck - isikhungo sokuphatha saseBordeaux, esinomtapo owodwa omkhulu eFrance.
Ungaphuthelwa i-Victory Arch (izakhiwo zamaRoma), enkabeni yeLa Vicroire
kanye nesibonelo esihle sezimpande zedolobha laseRoma.
Phumula futhi uthathe ipikinikini ku-Gardens yomphakathi egcwele, enyakatho nesigcawu seGambetta.
Isikhumbuzo seGirondins esigcawini saseQuinconces siyisipho esifanele kumaLungu ePhalamende aqhamuka eGironde adalulwe yiRobespierre.
UMusee D'Art Contemporain e-7, uRue Ferrère. Kufanelekile ukuvakashelwa uma unentshisekelo kubuciko besimanje. I-Richard Long slate line-up ophahleni iyinto engapheli. Imibukiso ihlala iguquka futhi imnyuziyamu iyindawo ekhuthazayo yokufakwa. I-CAPC ivulwe ngoLwesibili kuya ngeSonto nge-11AM-6PM (kuya ku-8PM ngoLwesithathu), ivaliwe ngoMsombuluko; ukungena ngu- € 5.50 (£ 4), kodwa kumahhala ngeSonto lokuqala lwenyanga.
UMuzie D'Aquitaine, 20, amakhosi uPasele. Imyuziyamu emangalisa ekhombisa izifanekiso ezibunjiwe zeGallo-Roman nezintambo ezenzeka emuva kweminyaka ye-25,000. Amahora- 11AM - 6PM Tue-Sun. Ukungena kwamahhala kwamaqoqo anaphakade; imibukiso yesikhashana ibiza ezungeze i- € 5 yabantu abadala.
Imyuziyamu yezwe lonke(Amamyuziyamu Kazwelonke), I-1 indawo de la Bourse. I-10AM - 6PM.Tue-Sun. imnyuziyamu yomlando yokuphathwa kwamasiko waseFrance. Uhlukile eFrance, ukhombisa umlando waseFrance ngokuhweba, ukuhweba kanye nentela futhi uphatha umdwebo wokuqala kaClaude Monet. Imali yokungena yamaqoqo angapheli futhi anesikhashana € 3 wabantu abadala, mahhala izingane. I-Audioguides ngesiNgisi ibolekwe i- € 2.
Yiba nokuhamba ngezinyawo emgwaqweni uSainte-Catherine osesifundeni i-Pedestrian Center futhi ujabulele ubuhle bendawo.
Cabanga ukuwela amabhuloho noma ukuthatha isikebhe esihamba ngomfula uqonde emfuleni (bheka uLes Quais).
Hambela izitebhisi ze-243 zombhoshongo wase-Saint-Michel, futhi ujabulele ukubukwa kwe-panoramu kweBordeaux (ukungena kwe-5 Euro - mahhala ezizwe ze-EU ezingaphansi kwe26).
Hlala isikhashana e-miroir d'eau (isibuko samanzi) emngceleni womfula. Njalo nangezikhathi ezithile, igcwele i-2 cm yamanzi, iguqulwe ngefu lokungafanele.
Yiba nesiphuzo nomdanso kwelinye lamabha amaningi noma amaklabhu e-Les Quais noma eLa Victoire.
Bukela amadada edlala epaki lomphakathi elikhulu enyakatho enkabeni futhi abalekele edolobheni eJardin Botanique, eBordeaux's Botanical Garden. Cishe kusukela nge-1855, ingadi ye-botanical iyindawo enhle yokuhamba uzungeze izindlela zayo eziningi, noma vele uhlale futhi uphumule. Uhambo oluqondisiwe luyatholakala, kanye nama-workshops ngezikhathi ezithile kanye nemisebenzi yezingane.
Izingadi zeBordeaux zivulekile: ukuphela kukaMashi kuze kube kuphela u-Okthoba - 8AM kuya ku-8PM; ukuphela kuka-Okthoba kuze kuphele uMashi - 8AM kuya ku-6PM. Ukuvunywa kwezingadi zeBordeaux kumahhala.
Fly indiza yokulwa. Ungandiza i-L39 Albatros kusuka Bordeaux International Airport. Iqala ku- € 1950.
I-SuperCar RoadTrip. Kuhlelwa uhambo lwangasese lomgwaqo eduze kwaseBordeaux. Thola izivini ezinhle kakhulu zeBordeaux phakathi kwezimoto zikanokusho eziguqukayo: iFerrari, iLamborghini, iJaguar neMercedes AMG. Shayela nomuntu omthandayo. Isipiliyoni esingalibaleki.
IMusée du Vin et du Négoce, I-41 rue Borie 333000 Bordeaux (phansi umgwaqo omncane, indawo yokumisa ithilamu: Ama-chartrons), I-10am-6pm. Umnyuziyamu we-petit we-Bordeaux Wine neRhwebo wenzeka ekwakheni umthengisi weewayini ezindala. Izivakashi zingathola umlando wokuhweba ngewayine ngezinto zobuciko, amavidiyo kanye nokuvakasha okuqondisiwe (ngokubhukelwa) okulandelwa ukunambitheka kwewayini komuntu siqu kanye nokwethulwa kwewayini lesifunda ngumunye wabasebenzi bezilimi eziningi. I-5-7 euros.
Ukuvakashela izivini kanye nokuthatha isampula amawayini endawo kungenye yezinto zobumnandi obukhulu lapho uvakashela iBordeaux. Yisifunda sesibili esikhula ngobukhulu emhlabeni futhi sikhiqiza amabhodlela angaphezu kwezigidi ezingama-800 ngonyaka. Ikhiqiza ezinye zewayini ezihamba phambili futhi ezihlonishwayo emhlabeni, ezinye zezindawo ezidume kakhulu:
I-Château Haut Brion
I-Château Lafite Rothschild
UChâteau Mouton Rothschild
I-Château Cheval Blanc
I-Château Grand Renouil
I-Château du Pavillon
Uhambo luyatholakala ngabasebenza abaningi. Ngokuhlukile, shayela phambili ukuze ubhukelwe. Qaphela ukuthi i-Latour ngokuvamile yamukela kuphela abaqoqi abaxakile nezingcweti.
Kukhona izinkambo zewayini zansuku zonke ezisuka eBordeaux nokuya kuzo zonke izivini ezinkulu zesifunda: iCanon Fronsac, iStreet Emilion, iMédoc, iGraves neSauternes.
Imikhosi yaminyaka yonke yewayini ehlobo iqhutshwa kanye ne-“Bordeaux-fête-le-fleuve” egubha umfula, umhlaba kanye nomphakathi wamazwe omhlaba.
Baningi abasebenza ngokuvakasha kulesi sifunda saseFrance. Bangahlelela ukuvakasha kwakho okuphelele (kufaka phakathi ukuhamba uye eBordeaux naseFrance) noma bangahlelela ukuvakasha kuma-wineries kanye ne-château yakho.
IBordeaux ikhiqizile ingcebo yayo kwezohwebo, futhi uhlelo lomnotho lwasekhaya luthembele kakhulu ezitolo nasemahholo okuhweba. Isikhungo i-Pedestrian Center sigcwele izitolo zezinhlobo zazo zonke izinhlobo zezingubo, ubuciko, imisebenzi yezandla, ukudla newayini njll. Uma ufuna izinto zikanokusho, yibangisa eGambetta isikwele nendawo ezikuyo.
Izingubo azibizi kakhulu kunaseParis, ngakho-ke gqoka izicathulo ezintofontofo nekhanda kuRue Sainte Catherine, indawo ehamba phambili ehamba ngezinyawo ende eYurophu nendawo enhle yokuthenga.
Vele, awukwazi ukushiya iBordeaux, ngaphandle kokuthatha newayini layo eliyintandokazi. Qiniseka ukuthi uyazi ngemithetho yangokwezifiso esikhumulweni sezindiza.
IGastronomy inendawo ebaluleke kakhulu edolobheni, egcwele izindawo zokudlela zazo zonke izinhlobo. Izindawo zokudlela zase-French zinikeza izitsha ezivela cishe kuzo zonke izingxenye zezwe, futhi kunezindawo eziningi zokudlela zase-Asia, zase-Afrika noma zase-Arabia. Ngokuvamile, ukuhamba ngeRue de Saint Remi kuyaphakanyiswa kakhulu. Kuyindlela yomgwaqo yokudlela yaseBordeaux ngokusemthethweni, ophela kusuka kolunye uhlangothi kuya eMiroir de l'eau kuya kolunye uhlangothi oluya eSt. Kusondele kakhulu ezingxenyeni eziningi zedolobha futhi kufinyeleleka kalula ngalo ngo-tram.
IBordeaux iyaphila ngesikhathi sasemini futhi iyaqhubeka ubusuku bonke. Uma ufuna umgoqo ozohlalwa kuwo nabangane noma ujabulele ukubuka umdlalo webhola, yibheke eLa Victoire, njengoba iningi labashicileli nemigoqo yedolobha lilapha. Cishe zonke izitolo ezikule ndawo ziyimigoqo, futhi uzokwazi ukuthola eyodwa evumelana nezidingo zakho.
Uma uthanda ukudansa noma ukuklabha, iningi lamakilabhu asebusuku aseQuais, eduze kwesiteshi sesitimela. Ukusuka edwaleni kuya ku-disco, ukudansa kuya ku-techno, futhi unokukhetha okuningi.
Ngenkathi ukungena kungenwa mahhala kubaningi bamakilabhu, ungadakwa lapho noma ngeke uvunyelwe ukungena.
ENyakatho: Isifunda saseMedoc, lapho kukhiqizwa khona ezinye zewayini ezidumile zeBordeaux. Amahlumela wokuqala Château Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux noChateau Mouton Rothschild wonke atholakala kwiMedoc. Uma uhlela ukuvakashela i-chateau, gcina okulandelayo: (1) shayela phambili wenze ukubhuka; (I-2) I-Chateau Latour ngokuvamile yamukela kuphela abaqoqi abaxakile nezingcweti; futhi
ENtshonalanga: Ngasentshonalanga, uzophelela e-Atlantic Ocean, ngamakhilomitha angaphezu kwama-250 wamabhishi esihlabathi wegolide ahambisana nolwandle lwamahlathi kaphayini angonakaliswanga; kunamadolobhana amancane amahle kakhulu abukeka eduze nolwandle, kufaka ne-Arcachon, idolobha eliseceleni lolwandle, elaziwa ngokukhiqiza kwalo oyster. Ungathatha isitimela kusuka eGare de Saint Jean eBordeaux ukuya e-Arcachon cishe i-7 euros, isitimela sithatha imizuzu eyi-40 ne-50. IChibi laseHourtins, ichibi elikhulu lamanzi amnandi France, itholakala lapho. Ehlobo, ipharadesi laso ukubhukuda noma ukuhamba ngamabhayisekili ehlathini lomuthi wepayini kuleyo ndawo. Eduze ne-Arcachon yindunduma yesihlabathi enkulu kunazo zonke eYurophu- iyathakazelisa kakhulu, ikakhulukazi uma uhamba nezingane ezincane.
EMpumalanga: Lapha uzothola iSanta Emilion, i-AOC eyaziwayo (cf Saint-Émilion AOC) ezungeze isigodi samaGugu se-UNESCO ngegama elifanayo (cf UNESCO World Heritage List). Lapha, chateau adume kakhulu yiChâteau Ausone noChâteau Cheval Blanc. Eduze, ePomerol AOC, kulele uChâteau Petrus. Ngaphezu kwalokho, i-Entre-deux-Mers phakathi komfula iGaronne nomfula iDordogne inezinhlobonhlobo eziningi zezingqinamba ezindala nama-wineries akhiqiza amawayini eBordeaux Superieur.
ENingizimu: Isifunda saseGraves, esihlanganisa ezinye zezivini ezindala kakhulu. Amazwe amabili adumile yiChâteau Haut-Brion noChâteau La Mission Haut-Brion. Ngaseningizimu-mpumalanga kukhona iSauternes, ekhiqiza enye yamawayini edosi edumile emhlabeni, iChâteau d'Yquem. Le ndawo iyathandeka kakhulu kwezokuvakasha zomlando, ngamadolobha amaningi amahle nezikhumbuzo zesikhumbuzo ezivulekele umphakathi. Amadolobha: iBazas, iSanta Macaire, i-Uzeste, iCadillac. Izinqaba: Chateau de Roquetaillade, Villandraut, Malle, Fargues, Cazeneuve.
Ukufinyelela kulezo zindawo, ungasebenzisa noma nojantshi besifunda (i-TER) noma imigqa yebhasi yedolobha. Ngemoto, zonke lezi zindawo zingaphansi kwehora ukusuka eBordeaux.
Isifunda sonke simbozwe ngebhayisekili elihlelwe kahle noma imizila yokuhamba ekuvumela ukuthi uhlole iBordeaux nemigwaqo yayo.